ओटोमोबाइल को जीवनकालमा अहिलेसम्म इन्जिन तेल भन्दा इन्जिन रक्षा गर्न राम्रो तरिका आविष्कार गरेका थिए। र हुनत एक सताब्दी भन्दा बढी, आफ्नो संरचना निरन्तर अद्यावधिक सञ्चालन सिद्धान्त नै रहन्छ - इन्जिन ठंडा सतह को तत्व बीच उचित पर्ची अनुपात सुनिश्चित। को सामान्यतः प्रयोग प्रजाति को एक 10W-40 तेल छ। यो पद गूढ रहस्य तरल को विशेषताहरु बारे पूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ।
आवेदन नियमहरूको एक राम्रो समझ र को विकल्प को लागि इन्जिन तेल इन्जिन भागहरु यसको प्रभाव सिद्धान्त बारेमा थप जान्न आवश्यक छ।
शक्ति एकाइ प्रक्रियाहरू को सञ्चालन समयमा अनिवार्य यसको घर्षण तत्व बीच उत्पन्न। यो विशेष रूप सिलेंडर टाउको र सनकी तंत्र मा पिस्टन को गति लागू हुन्छ। यो जो adversely सामाग्री असर र तीव्र लगाउन सक्छ उच्च तापमान उत्पादन गर्छ।
इन्जिन तेल एक तरल छाप therebetween एक प्रकारको छ। इन्जिन सुरु गरिएको छ र इन्धन को पहिलो ब्याच जलाए भएपछि - तेल सतह माथि समान वितरण भागहरु सार्दा उजागर। यो अतिरंजित विशेषता, प्रायजसो प्रक्रिया सबै विवरण को पूर्ण विवरण देखि मात्र कला गर्न आवश्यक छ। उपभोक्ताहरु यो 10W-40 मात्र के अर्थ थाहा लागि, तर पनि आधारभूत मापदण्डहरु यो महत्त्वपूर्ण छ:
इन्जिन र बाह्य कारक को मापदण्डहरु अनुसार सबैभन्दा उपयुक्त तेल 10W-40 को विकल्प हो। डिकोड यी विशेषताहरु बारे पूर्ण जानकारी दिन हुनेछ।
विचार आवेदन इन्जिन तेल पहिलो आन्तरिक दहन इन्जिन को डिजाइन चरण मा राखिएको थियो। एक खनिज - रासायनिक उद्योग विकास गर्न पूर्व आफ्नो तरिका को केवल एक थाह थियो। तेल प्रशोधन देखि व्युत्पन्न छन् जो प्राकृतिक सामाग्री, बनेको। तर यसको गुण सधैं बाह्य अवस्था र इन्जिन को विशेषताहरु अनुरूप छैन। खनिज तेल को बेफाइदा हो:
चिपचिपाहट मा परिवर्तन सीमा तापमान (माइनस र प्लस रूपमा) पुगन गर्दा।
अपेक्षाकृत कम आफ्नो जीवन समय। यो तेल अब यसको आन्तरिक संरचना को ठूलो परिवर्तन, इन्जिन छ। यो सकारात्मक गुण को एक हानि गर्न जान्छ।
को undoubted फाइदा किफायती मूल्य छलफल गर्न सकिन्छ।
कृत्रिम - को बीसौँ शताब्दीका, तेल को एक नयाँ प्रकारको दोस्रो आधा। यो उड्डयन उद्योग आए। परिणामस्वरूप जटिल संश्लेषण, यो चाँडै लोकप्रिय भयो हो।
कम तापमान मा विमान इन्जिन सुरु गर्न विशेष विकास, मोटर वाहन उद्योग मा आफ्नो अनुप्रयोग पाइएन छ। तसर्थ, इन्जिन तेल 10W-40 निम्न लाभ छ:
ठूलो सञ्चालन तापमान दायरा।
गुण को हानि बिना लामो अवधि सञ्चालन।
मात्र यो गर्न peculiar छन् जो चिपचिपाहट को अद्वितीय मापदण्डहरू, इन्जिन तेल को प्रकार।
एक मध्यवर्ती संस्करण उत्पादन लागत कम गर्न विकसित भएको थियो - अर्द्ध-कृत्रिम प्रकार। यो स्नेहक को माथि प्रकार मिश्रण को परिणाम हो।
अब मुख्य प्रकार ज्ञात छ कि, एक विस्तृत विवरण प्रक्रिया तेल को विशेषताहरु 10W-40। यो पद गूढ रहस्य अप धेरै संकेतक बनेको छ।
10W ° सी -25 गर्न न्यूनतम तापमान मा चिपचिपाहट प्यारामिटर को अवधारणा सङ्केत गर्छ
40 - उच्च तापमान माथिल्लो सीमा (अप गर्न + 40 ° C)।
वास्तवमा, जब निर्माता प्याकेज यस्तो डेटा संकेत, यो तेल को एक विशेष प्रकारको सञ्चालन सीमितता बारेमा प्रयोगकर्ता जानकारी। रूपमा वास्तवमा गैर-सिफारिस तापमान अवस्था को मामला मा पावर प्लान्ट संचालन मा देखिन्छ आवश्यक?
अपरेटिङ अवस्था संग गैर-अनुपालन
घनत्व मा वृद्धि मा सीमित स्तर परिणाम तल तापमान को कमी। यस मामला मा, त्यहाँ इन्जिन सुरु समस्या हुन सक्छ - तेल समान रूप सतह माथि वितरण गरिएको छैन। यस मामला मा, सम्भव तीव्र वेयर वा शक्ति एकाइ को टूटना। 10W-40 - त्यसैले, यो ट्रान्सक्रिप्ट तेल मा के जानकारी छ जान्न महत्वपूर्ण छ।
वृद्धि तापमान संग, तेल घनत्व critically कम। यसलाई अब रूपमा यसको कार्य गर्न सक्षम छ चिपचिपाहट यो असम्भव एक वर्दी फिलिम बनाउन बनाउँछ। को स्नेहन तरल पदार्थ को सबैभन्दा crankcase मा accumulates। स्थिर उच्च तापमान अवस्था मा तरल को आंशिक वाष्पीकरण छ। यो घटना एक विशेषता सुविधा - निकास ग्याँस र आफ्नो आवाज को वृद्धि darkening। यो पनि तीव्र विफलता गर्न जान्छ।
यो अनुप्रयोग आधारमा तेल को ब्रान्ड चयन गर्न आवश्यक छ। अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान - हाल अन्तर्राष्ट्रिय मानक एपीआई प्रयोग। अनुसार यो पेट्रोल र डिजेल इन्जिन लागि छुट्टै वर्गीकरण अपनाए। मुख्य फरक मुद्दा कारमा मोडेल निहित।
तसर्थ, स्नेहक चयन गर्न छैन नम्बर 10W-40 तेल मा अर्थ के थाहा पर्याप्त छ। यी डाटा साथै खातामा वर्गीकरण लिनुपर्छ। आधुनिक कार को लागि बनेको चिह्न तालिकामा संकेत गर्नुभयो।
अपरेटिङ अवस्था थप कठोर
ऊर्जा बचत गुण सुधार
परिचालन अवधि बढ्ने
उच्च संकेतक ओक्सीकरण प्रतिरोध
टर्बाइन संग कारहरुको लागि
विषाक्तता कम गर्न डिजाइन (संयुक्त राज्य अमेरिका)
टरबाइन र सेट EGR वाल्व संग
कहिलेकाहीं इन्जिन को सबै प्रकार को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर ब्रान्डहरु, बिना ऊर्जा स्रोत को प्रकार को छन्।
रूपमा वास्तविक अवस्था गर्न सकेसम्म नजिक तेल को प्रकार छनौट पछि, यो यसको गुणस्तर को सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, दुई फरक तरिका प्रयोग गर्न सकिन्छ:
प्रयोगात्मक। धेरै परीक्षण र त्रुटि मार्फत एक साँच्चै गुणस्तर तेल 10W-40 खोज्न।
को एपीआई वर्गीकरण बारेमा थप जान्न।
किनकी यो इन्जिन को सञ्चालन गर्न एक संभावित खतरा छ छैन उत्तरार्द्ध विधि, अधिक उपयुक्त छ। सालाना एपीआई प्रतिनिधित्व स्नेहक को नयाँ ब्रान्ड आकलन छ। तिनीहरूले परिणाम आधारमा हुनेछ एक गुणस्तर सूचकांक नियुक्त हुन।
ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच डिजेल लागि आफ्नो छ - - ए, बी, सी, डी, ई, F4 पेट्रोल लागि आठ प्रतीक गरे। त्यसैले, खरीद गर्दा आवश्यक पत्र 'ध्यान छ - भन्दा यो वर्णमाला को शुरुवात, राम्रो गुणस्तर टाढा छ।
विशेष रासायनिक घटक को स्नेहक गुण सुधार गर्न प्रयोग। तिनीहरूले सामूहिक ज्ञात additives छन्। त्यसैले कहिलेकाहीं 10W-40 को आधारभूत गुणहरू थाह पर्याप्त छैन। additives को प्रकार, यसको प्राविधिक मापदण्डहरु र सामग्री सहित पूर्ण विशेषताहरु निर्माता द्वारा निर्दिष्ट प्याकेज मा, गूढ रहस्य।
त्यहाँ additives को विभिन्न प्रकार हो। तिनीहरूलाई केही निर्माता, स्वतन्त्र प्रयोगको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन भाग सीधा थप्छ।
सबैभन्दा क्षणमा लोकप्रिय को प्रकार निम्न छन्:
चिपचिपाहट सूचकांक वृद्धि।
दहन को उत्पादनहरु इन्जिन को भित्री सतह हटाउँदै।
oxidative प्रक्रियाहरू विकास रोक्छ।
थप्नु अघि तिनीहरूलाई प्रत्येक राम्ररी प्रयोगको लागि निर्देशनहरू थाह हुनुपर्छ। आखिर, सकारात्मक प्रभाव बाहेक हुन सक्छ र साइड इफेक्ट।
इन्जिन पूरा जीवन राख्न र अनपेक्षित breakdowns जोगिन गर्न तेल छानेर लागि निम्न सुझावहरू पालन गर्न सिफारिस गरिएको:
खरिद गर्नु अघि तपाईंले निर्माताको सिफारिसहरू कार संग जाँच गर्नुपर्छ।
यो निर्माता को अनुसूची अनुसार एक तेल परिवर्तन गर्न अनिवार्य छ। को शहरी वातावरण स्नेहक खपत बढ्छ लागि कम तैयारी मा ड्राइभिङ गर्दा। यसलाई समय समयमा inspected विशेष स्टेशन हुन भन्दा राम्रो छ।
तपाईं कुनै पनि इन्जिन तेल 10W-40 भर्न अघि, तपाईं लुगा धुने मोटर गर्नुपर्छ। यो ऊर्जा वृद्धि र प्रदर्शन गुण घट्यो को likelihood हटाउनेछ।
एक समय तालिका जाँच मिसिन आफैलाई लागि बनाउन बस पर्याप्त - अनुभवी मोटर चालकहरुलाई सधैं यी नियमहरू द्वारा निर्देशित।
इन्जिन तेल को नाम को विशेष सिक्ने, सुरक्षित स्नेहक को सही प्रकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न निर्माताहरु को ठूलो संख्या दिइएको त यो एकदम गाह्रो छ। प्रत्येक मोटरहाक्ने व्यक्ति थाहा महत्त्वपूर्ण छ लागि, अर्थ 10W-40। disproportionately राम्रो तेल को मूल्य भन्दा बढी कार मरम्मत को लागत - त्यसैले, यो मुद्दा लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
प्रसारण इनपुट शाफ्ट असर
नयाँ होन्डा सीआर-वी 2013 को समीक्षा
टायर Hankook: कृतज्ञ ग्राहकहरु को समीक्षा
"निसान Sentra": मालिकको समीक्षा
Gastritis संग समुद्र buckthorn तेल - प्रकृति मा पहिलो सहायता
बेन Elton: बिब्लियोग्राफी
के यदि वयस्कको आँखा निस्किन्छ भने?
बुना पुतली - र एक खेलौना, र भित्री सजावट
सामान्य Vrangel Petr Nikolaevich। बायो डाटा
तीन सरल विकल्प कसरी सानो राजकुमारीको लागि उत्कृष्ट स्कर्ट सिलाई